Abefundisi bakhathazwa ngeyokushona kozakwabo ngenxa ye-coronavirus – Sivubela intuthuko Newspaper
UMBHISHOBHI Vusi Dube iyilungu leSishsyamthetho KwaZulu-Natal.
KUPHAKANYISWA izindlela ezintsha ezizosetshenziswa ngabefundisi baseMgungundlovu njengoba lesi sifunda sikhushukelwa ngamandla yisibalo sabagcotshwa ababulawa yicoronavirus kuhlanganisa namakhosikazi abo njengoba kukhona abasemgonqweni emakhaya nasezibhedlela belwela impilo yabo.
UDkt Lucas Ngoetjana onguMqondisi weKwaZulu-Natal Christian Council (KZNCC) uthi iCOVID-19 ishaye kwezelwa kubagcotshwa ikakhulukazi eMgungundlovu. Uthe sebephume umkhankaso wokufundisa abagcotshwa ngezindlela okumele bazisebenzise uma beqhuba izinkonzo emabandleni nasemingcwabeni. “Abefundisi babhekene nengozi enkulu ngoba bangabantu abasebenza ngabantu abaningi. Siyi-KZNCC sesiphume umkhankaso wokufundisa emabandleni ngayo qobo icorona. Umkhankaso wethu uhambe kahle esifundeni saseMgungundlovu okuyisona ebesihlaseleke kakhulu njengoba sesizodlulela nakwezinye izifunda,” kusho uDkt Ngoetjana.
UMbhishobhi Vusi Dube we-Ethekwini Community Church abuye abe yilungu lephalamende laKwaZulu-Natal okunguyena odalulele abezindaba ngokushona kwabefundisi baseMgungundlovu uwubhekisa kubona umunwe bengabagcotshwa ngesibalo esiphezulu sabagcotshwa abashonayo eMgungundlovu ngezifo ezihlobene neCorona njengoba ethi abanye kabakunaki ukulandela imithetho ebekiwe okumele igcinwe uma kwenziwa izinkonzo. “Lokhu kusgula kwabefundisi kwakumele sikunqande ngoJune kwakungcwatshwa uMfu Trevor Phoswa waseMgungundlovu njengoba isibalo sabefundisi nesabazalwane ababehambele leya nkonzo seqa. Siphakamise ukuthi umfundisi makahambele inkonzo yomngcwabo ngoba ethole isimemo. Masivume ukuthi isikhathi esiphila kusona okwamanje sehlukile kwesijwayelekile,” kusho uMbhishobhi Dube.
UMbhishobhi Chris Thenjwayo we-Interdenominational African Ministers Association in South Africa (Idamasa) uthe enhlanganweni yabo bakhona abangamalungu asebehlabekile ngakho bakhethe ukuza nezindlela ezintsha zokukhonza nokungcwaba. “Akusekho nkonzo esizokwenziwa manje ibhokisi selizofika liqonde ngqo emgodini umuntu eseyokhwezwa. Sikhuza nabefundisi ukugijimela ukuyoba yizicukuthwane emingcwabeni bayohlala ematafuleni bafune ukutendwa, mabafane nabantu bonke badlele kuma-takeaways,” usho kanje.